🥇 ▷ Telefónica waxay iibsatay 50% ganacsiga Prosegur & # 039; ✅
Telefónica waxay iibsatay 50% ganacsiga Prosegur & # 039;
Telefoon iyo Prosegur ayaa hadda heshiis gaadhay Telefónica waxay heshay saamiga 50% ganacsiga qaylo-dhaanta ee Prosegur ee dalka Spain. Howlgalku wali waa la sugaya ogolaanshaha waxaana lagu qiimeeyaa ilaa 300 milyan oo Euro oo Telefónica laga yaabo inay bixiso ama qayb ahaan saamigeeda, si Prosegur u noqon karo saamilaha Telefónica.
Haddii doorashada koowaad la doorto (bixi lacagta 300 milyan oo Yuuro saamiga), Prosegur wuxuu lahaan lahaa 0.8% shirkadda isgaarsiinta. Sidoo kale, Telefónica waxay u arki laheyd ganacsigeeda amniga inuu sii xoogeysanayo, kaasoo ilaa hadda ka koobnaa inuu bixiyo alaarmiga iyada oo loo marayo heshiisyo lala galay dhinac saddexaad. Tusaale waxaa ka mid ahaa Movistar Verisure Hogar, oo aan laga heli karin May 3, 2018.
A (cusub) ka go’naanshaha amniga
Bidix ilaa midig: Christian Gut, madaxa Prosegur, iyo Ángel Vilá, madaxa shirkadda Telefónica.
Waxay ka faalloodaan Telefónica in “isbahaysigan, labadan maamul ay doonayaan dardargelinta horumarinta ganacsiga alaarmiga ee dalka Spain iyo in la soo bandhigo soo-jeedinta adeegyada amniga deggeneyaasha iyo ganacsiga iyada oo loo sii marayo jiilkii xalalka hal-abuurka leh ee loogu talagalay macaamilka iyo ku biirinta awoodaha is-dhammaystirka ee labada shirkadood. Waxay sheegeen in “Suuqa qaylo-dhaanta ee Isbaanishka uu soo maray heerar koboc aad u weyn” iyo in isbeddelkan la filayo inuu kordho sannadihii la soo dhaafay, marka waa heshiis ay labada shirkadood ku guuleystaan.
Sida laga soo xigtay Ángel Vilá, Maamulaha Telefónica, “lahaanshaha lammaane sida Prosegur wuxuu noo oggolaanayaa inaan sii wadno horay u socodsiin, dhaqso, himilooyinkeenna ah inaan si sii kordheysa ugu soo bandhigino nolosha macaamiisheenna, adeeg ballaadhan oo guryo ah“Christian Gut, maamulaha shirkadda Prosegur, wuxuu xaqiijinayaa” waxaan ka shaqeyn doonnaa sidii aan u horumarin laheyn soo jeedin cusub oo adeegyo ah oo aad u dhameystiran isla markaana wax ku ool ah macaamiisheenna “.
Wadashaqeyn suurtagal ah oo ka dhaxaysa maalgelinta raasamaalkooda ayaa sidoo kale la baarayaa.
Isbahaysiganu halkan kuma sii jiro, laakiin waxay sidoo kale oggolaadeen inay sahamiyaan suurtogal wada shaqeynta u dhaxeysa cutubyadeeda Venture Capital (maal gelin) maalgashi bilowga): Prosegur Tech Ventures iyo Telefónica Furan mustaqbalka. Iyadoo aan la sii socon, dhawr bilood ka hor Prosegur waxay furatay sanduuq maalgashi oo gaaraya 30 milyan oo yuuro si kor loogu qaado hal-abuurka teknolojiyadda ee amniga shan kaas bilowga Horey ayey uga faa’iideysteen.
Sidaan u nidhi, maahan markii ugu horreysay oo uu Movistar galo ganacsiga amniga. Kusoo bilaw 2015 Movistar wuxuu bilaabay Movistar Verisure Hogar gudaha Interner iyo baakadaha iskujira. Qiimihiisu wuxuu ahaa 16 euro bishii khidmadda adeegga iyo sagaal euro bishii oo loogu talagalay kiraysiga qalabka, in kastoo kan dambe la bixin karo hal mar. Mar dambe lama helin May 3, 2018 “sababaha ka baxsan Movistar.”
Share Shareffanica wuxuu ku iibsaday 50% ganacsiga qaylo-dhaanta ee Prosegur gudaha Spain 300 milyan oo yuuro